Wadahadalka lacagta: London Heathrow waxay rabtaa Rakaabka la tallaalay inay mar labaad safraan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Wadahadalka lacagta: London Heathrow waxay rabtaa Rakaabka la tallaalay inay mar labaad safraan
Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka kala duwan
FRAPORT oo ka hawlgala Madaarka Frankfurt, Amsterdam Schiphol ayaa si tartiib tartiib ah ula qabsanaysa, laakiin London Heathrow ayaa hoos u dhacday. Maaraynta Heathrow waxay dalbanaysaa in la furo firaaqada iyo safarka ganacsiga ee UK ee rakaabka la tallaalay.
Gegida dayuuradaha ee London Heathrow wuxuu rabaa in rakaabka la tallaalay ay mar kale ku duulaan garoonkan diyaaradaha ee London
Maalgelinta Heathrow weli waa mid adkeysi leh, in kasta oo ay sii kordhayaan khasaaraha -Khasaaraha is-biirsaday ee ka yimid COVID-19 wuxuu gaaray £ 2.9bn.
London Heathrow lagu maalgaliyay farsamooyinkii ugu dambeeyay ee COVID-19 iyo hannaankii lagu gaari lahaa si loo gaaro qiimeynta Skytrax 4*, oo ah tii ugu sarreysay oo ay gaarto garoon diyaaradeed oo UK ah.
Saraakiisha Madaarka London waxay tilmaamayaan in gegida dayaaraduhu sii amro in la daboolo wejiga laakiin waxay leeyihiin Britain waxay ka luminaysaa dakhligii dalxiiska iyo ganacsi la -hawlgalayaasha dhaqaalaha ee muhiimka ah sida EU iyo Mareykanka sababta oo ah Wasiirradu waxay sii wadaan inay xaddidaan safarka rakaabka si buuxda loogu tallaalay meel ka baxsan UK. Waddooyinka ganacsiga ee u dhexeeya Midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa soo kabsaday ku dhawaad ​​50% heerarkii hore ee masiibada halka Boqortooyada Midowday ay 92% hoos u dhacday.
Dalabka rakaabka ayaa ka sii kordhaya hoos u dhaca taariikhiga ah, laakiin xayiraadaha safarka ayaa weli ah caqabad - In ka yar 4 milyan oo qof ayaa ku safray Heathrow lixdii bilood ee ugu horreysay sannadka 2021, heerkaas oo qaadan lahaa 18 maalmood oo keliya in la gaaro sannadka 2019. Isbeddellada ugu dambeeyay ee nidaamka iftiinka taraafikada ee dawladda ayaa dhiirri -gelinaya, laakiin shuruudaha imtixaanka qaaliga ah iyo xannibaadaha safarka ayaa ah dib u haynta dib -u -soo -kabashada dhaqaalaha Boqortooyada Midowday waxayna arki kartaa Heathrow oo soo dhoweynaysa rakaab ka yar 2021 marka loo eego 2020.
Boqortooyada Midowday (UK) ayaa gadaal u sii dhacaysa iyada oo tartamayaasha reer Yurub ay ka faa'iideysanayaan faa'iidada dhaqaale -Caddadka xamuulka ee Heathrow, oo ah dekadda ugu weyn Britain, ayaa weli 18% hoos uga dhacay heerarkii hore ee masiibada, halka Frankfurt iyo Schiphol ay kor u kaceen 9%.
Taageerada maaliyadeed waa inay jirtaa ilaa inta xayiraaduhu ku sii jiraan safarka - Safarku hadda waa waaxda kaliya ee weli hortaagan xannibaadyo, iyo inta ay sidaas tahay, Wasiirradu waa inay bixiyaan taageero maaliyadeed oo ay ka mid tahay kordhinta qorshaha furfurnaanta iyo yareynta sicirka ganacsiga. Heathrow waxay bixisaa ku dhawaad ​​£ 120 milyan sanadkiiba qiimayaal, in kasta oo ay khasaare tahay; dawladdu waxay beddelaysaa siyaasaddii si ay nooga hor istaagto inaan dib u soo ceshanno lacag -bixinnada dheeraadka ah waxaanan arrintaas ku xujeynaynaa Maxkamadda Sare.
Dawladda UK waxay tusaysaa hoggaan caalami ah oo leh sumaynta sumaynta gaadiidka qorshe - Waxaan soo dhaweynaynaa istaraatijiyadda duulimaadka eber ee dawladda UK, taas oo muujinaysa in koboca duulimaadku uu la jaanqaadi karo in la gaaro qiiqa eber ee 2050. Waxaan kaloo soo dhaweynaynaa waajibaadka la soo jeediyay ee ah in si tartiib -tartiib ah loo kordhiyo isticmaalka Shidaalka Duulista Hawada (SAF); oo ay weheliso habka xasilloonida qiimaha SAF, tani waxay kicin kartaa koror aad u weyn xagga wax -soo -saarka SAF, oo shaqooyin ka abuuri doonta UK oo dhan.
Shirkadaha diyaaradaha ee Heathrow ayaa hormuud u ah duulista hawada - Shirkadaha diyaaradaha ee Heathrow waxay mar hore ka go'an tahay inay adeegsadaan heer ka sarreeya SAF marka la gaaro 2030 marka loo eego kiiska ugu wanaagsan ee Guddiga Isbeddelka Cimilada. Waxaan dhawaan helnay shixnadeennii ugu horreysay ee SAF, oo ah caddeyn muhiim u ah fikradda isku -darka SAF iyo kerosene garoonka weyn ee caalamiga ah ee xarunta.
Madaxa Heathrow John Holland-Kaye ayaa yiri:
“Boqortooyada Midowday (UK) waxay ka soo baxaysaa saamaynta ugu xun ee masiibada caafimaad laakiin waxay ka dambaysaa kuwa ay kula tartamaan Midowga Yurub ee ganacsiga caalamiga ah iyagoo ka gaabiyey inay ka qaadaan xayiraadaha. Ku beddelidda imtixaannada PCR -ga oo leh tijaabooyin qulqulka dambe ah iyo furitaanka socdaallada EU -da iyo Mareykanka ee tallaalka dhammaadka Luulyo waxay bilaabi doontaa inay ka soo kabashada dhaqaalaha Britain dhulka ka baxdo. ”